न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्न कानुन कहिले बन्छ ? – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्न कानुन कहिले बन्छ ?
न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्न कानुन कहिले बन्छ ?
दीप संञ्चार भदौ १७, २०७८ गते ६:४१ मा प्रकाशित
संविधान जारी भएको ६ वर्ष बित्दा पनि न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि अझै कानुन बन्न नसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दिएका छन् । सो ‘निवेदन दर्ता हुने कि नहुने अन्यौल छ । सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमै अधिवक्ता केसीको रिट दरपिठ गरिदिएपछि उनले इजलासमा निवेदन दिए ।
तर, सो व्यवस्थाअनुसार अहिलेसम्म कानुन बन्न सकेको छैन । सोही आधार टेकेर न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचार रोक्न भन्दै तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले ५ चैत २०७४ मा कानुन बनाएर न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला उनको घोषणाले न्यायालयमा पनि हलचल मच्चियो । तर, उनले सो प्रक्रिया पुरा गर्न नपाउँदै मन्त्री पदबाट बिदा लिनुप¥यो ।
न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा ३, १ र २ मा ’न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राखिनेछ’ भन्ने प्रावधान छ । ऐनको सो प्रावधानले नेपालको संविधानको धारा २७ ले दिएका अधिकार अनुचित रूपले बन्देज लगाएकाले सो प्रावधान बदर गर्न रिटमा मागदाबी गरिएको छ । न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने र कानुन निर्माण हुनुपर्ने भन्दै नेपाल बारले पटकपटक ध्यानाकर्षण गर्दै आइरहेको छ ।
यसअघिको ऐनमा २–२ वर्षमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, नबुझाउँदा कारबाही गर्ने व्यवस्था थिएन । तथापि, न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मा पनि त्यसरी बुझाइएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने प्रावधान कायमै छ । त्यसैले बुझाइएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । ऐनको दफा २९ ९३० मा न्यायाधीशले बुझाएको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने उल्लेख छ । कतैबाट उजुरी नपरेसम्म न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन हुँदैन ।
तर, यस धाराअनुसार कानुन बन्न नसक्दा भ्रष्टाचारका अपुष्ट आरोपबाट टाढा रहन सकेका छैनन्, न्यायाधीशहरू । न्यायालय र सेनामाथि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन । संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश, न्यायपरिषद् सदस्य, संवैधानिक निकाय प्रमुख वा पदाधिकारीले पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेमा संसद्ले महाअभियोग लगाउन सक्छ । निराजन पौडेलले आजको राजधानी दैनिकमा लेख्नु भएको छ ।